Wasiir Fiqi “Gulufka waa sii socon doona ilaa dadkeenu ka helaan Xoriyad Nololeed ” iyo Al-shababkii ugu badnaay oo iska baxay deegaano dhowr ah. | Weheliye Online
Home Wararka Wasiir Fiqi “Gulufka waa sii socon doona ilaa dadkeenu ka helaan Xoriyad...
Wasiir Fiqi “Gulufka waa sii socon doona ilaa dadkeenu ka helaan Xoriyad Nololeed ” iyo Al-shababkii ugu badnaay oo iska baxay deegaano dhowr ah.
Wasiirka Wasaaradda Amniga Dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo war fidiyeenka la hadlay ayaa sheegay iney ku howlan yihiin sidii shacabka reer Galmudug ay u heli lahayeen ku noolaashaha xoriyad buuxda dhamaan dagmooyinka Galmudug.
Ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo kuwa Xooga Dalka SNA oo is kaashanaya ayaa dagaal xoogan ku qaaday fadhiisimo ay lahaayeen Al-shabaab,waxeyna ka xureeyeen deegaano dhowr ah oo ay ka talin jiriin Al-shabaab.
Previous articlePUNTLAND Oo War cusub Kasoo Saartay Khilaafka U Dhexeeya Madaxweyne Farmaajo Iyo RW Rooble
Next articleWasiir ku xigeenkii wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka oo saakay u geeriyooday cudurka Covid19